galmudugnews.com » Daawo Xaflad lagu taageera Madaxweynaha Galmudug Timakalajeex oo Nairobi lagu qabtay .
Home » WARARKA » Daawo Xaflad lagu taageera Madaxweynaha Galmudug Timakalajeex oo Nairobi lagu qabtay . Daawo Xaflad lagu taageera Madaxweynaha Galmudug Timakalajeex oo Nairobi lagu qabtay . galmudug on
Sep 23rd, 2012 //
No Comment Views 16477Xafladan oo ay ka soo qeyb galeen dadweyne aad u fara badan ee ku dhaqan kenya iyo Gobolada ku dhow dhow ayaa eheyd mid aad loo soo agaasimay, taasoo ay qabanqaabadeedii lahaayeen dhalinyaro guntiga dhiisha isaga dhigay ee galmudug sidii xafladan ay ku qabsoomi leheyd.
waxaa kaloo xafladan ka soo qeyb galay Cuqaal, nabad doono, oday dhaqameedyada qaarkood, waxaa kaloo xafladaas ka soo qeyb galay madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug khaliif maxamuud cabdi cilmi
Xafladan oo dadweynihii ka soo qeyb galay ay aad u taageereen Maamulka cusub khaliif maxamuud cabdi cilmi oo ay balan qaadeen inay hiill iyo hooba la garab istaagi doonaan .
kooxaha fanka ayaa ku soo bandhigey heeso iyo cayaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa eheyd mid dakii ka soo qeyb galay xafladda farax galisay.
xaflada waxaa ka soo qeyb galey masuuliyiin ka socota maamulka puntland iyo ahlusuna waljameeca ,masuuliyiin ka socota maamulka xumin iyo xeeb
sidoo kale waxaa xaflada ka hadley masuuliyiin ahlu suna waljameeca oo sheegey in ay taageersan yihiin madaxweynaha cusub ee galmudug loona baahan yahay in ahlusuna meel walba oo ay joogaan la shaqeeyaan khaliif maxamuud cabdi cilmi
Waxaa xaflad qudbad ka soo jeediyay madaxweynaha Galmudug khaliif maxamuud oo mahad gaara u celiyay dadkii isku xilqaamay inay xafladaan qabsoonto.
madaxweynaha ayaa ka warbixiyey maamulkiisa halka wax umarayaan waxa uuna sheegey in shacabka galmudug ay heli doonaan amaan la isku haleen karo xukuumadiisana ay ku howlan tahey hormarinta caafimaad iyo Amaanka taasina ay muhiim u tahey Dowlad goboleedka galmudug
ugu dambeyn madaxweyna maamulka galmudug ayaa baaq u direy waxgarad iyo aqoon yahana galmudug in aysan daawan waxa haatan ka socda galmudug loona baahan yahey in ay gacan ka geystaan wax walba oo wax u dhimi kara dowlad galmudug
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21021 hitsContact US - 19681 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15793 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15502 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13964 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13919 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13832 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13747 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11837 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11804 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11753 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11539 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11510 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11367 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11266 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11173 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11092 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11066 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10892 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10532 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10377 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10365 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 10073 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10035 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9795 hits Home About